Mark Gurman na-ahapụ 9to5mac web | Esi m mac
Mark Gurman na-ahapụ websaịtị 9to5mac
Ozi a doro anya na ọ dịghị onye tụrụ anya n'oge a na fim ahụ, mana eziokwu bụ na eze nke ntapu na asịrị banyere ngwaahịa Apple. hapụ aha saịtị ahụ ebe ọ bipụtara ihe niile metụtara Apple, 9to5mac. Eziokwu bụ na amaghị ebe njedebe ma ọ bụ ihe Gurman na-ezube ime ugbu a, mana site na ebe a anyị nwere olile anya na ihe niile ga-aga nke ọma maka ya.
O doro anya na ọtụtụ ndị ọrụ ga-adị ugbu a ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ a WWDC 2016 dị jụụ na ntinye nke Mark, na ntanetị na ndị ọzọ ga-ewe iwe karị. Ma O doghịkwa anyị anya ma ọ bụrụ na ọ ga-achọta weebụsaịtị ya ma ọ bụ na ọ na-ezube ịga n'ihu na asịrị ahụ n'ebe ọzọ. ebe ha nwere ike ịkwụkwu ya ụgwọ, nke bụ eziokwu bụ na o nyebeghị ihe kpatara ọpụpụ ya na anyị nwere obi abụọ na ọ ga-eme ya.
Nke a bụ tweet si isi nke 9to5mac na-ekwupụta ọpụpụ Gurman:
Ọ dị nnọọ mwute ịkpọsa nke ahụ @IGIHE agaghizi ede @ 9to5mac Ọpụpụ kemgbe otu afọ na-eme…
- Seth Weintraub (@llsethj) 1 June nke 2016
Gurman n'onwe ya na-elekọta ịzaghachi tweet na-ekele ha maka ihe karịrị afọ 6 ọnụ:
@IGIHE @ 9to5mac Daalụ maka ịnweta ohere na m 6 + afọ gara aga, enwere m ekele maka ihe niile ma nwee obi ụtọ maka ọdịnihu anyị!
- Mark Gurman (@markgurman) June 1, 2016
Asịrị Apple ahụ kwụsịrị ebe a? Mba. Ha agaghị enwe ntụkwasị obi ugbu a? Emela. Asịrị ahụ ga-anọgide na-adị na nkwụsị nke ngwaike ngwaike Apple na ngwanrọ ga-anọgide na-adị. Gurman bụ otu n'ime ndị ziri ezi n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ akụkọ ikpeazụ ọ bụla edepụtara na nke ahụ ga-egosi, mana igwe nke ịmepụta asịrị na ịkọ akụkọ na-aga n'ihu. A ghaghi ikwu na Mark Gurman adighi ezi mgbe nile na amuma ya ma o doro anya na asusu ma obu ugha nke afo abuo gara aga enweela nke oma, na mbu o siri ike ichota igodo ahu n'enweghi uzo ozo ma obu Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mark Gurman na-ahapụ websaịtị 9to5mac
Ugbu a ngwa ọdịnala na ire ere, chọta ngwa Mac OS X niile na ọrịre
Flume, instagram maka Mac dị n'efu maka obere oge